Mpitarika Mpianatra Maty tany Am-ponja & Ady any Libanona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Mey 2018 9:52 GMT
Maty tany am-ponja ny Iraniana iray mpitarika mpianatra, Akbar Mohammadi, raha nifady hanina. Nosamborina voalohany izy tamin'ny 1999 taorian'ireo fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Téhéran. Araka ireo vaovao azo, nosamborina ny ray aman-drenin'i Mohammadi vantany vao tonga tao Iran. Tohina ireo bilaogera maro naheno ity vaovao ity ary nizara ny heviny sy ny fihetsehampony tao anatin'ny bilaoginy tamin'ny fomba isan-karazany, manomboka amin'ny fanoratana ka hatramin'ny fanaovana sariitatra.
Fahafahana Maharitra Mandrakizay
Namoaka sariitatra tao amin'ny bilaoginy sy tao amin'ny Roozonline ho fahatsiarovana an'i Mohammadi i Nikahang, mpanao sariitatra malaza & bilaogera.
Miala amin'i Zahra Kazemi ka tonga hatrany amin'i Akbar Mohammadi
Bilaogera maro no nampitaha ny fahafatesan'i Akbar Mohammadi tamin'ny an'i Zahra Kazemi, ilay Kanadiana-Iraniana mpanao gazety mpakasary maty tanatinà tranga mampiahiahy. Mampahatsiahy antsika ny mampitovy ny fahafatesan'i Zahra Kazemi sy Akbar Mohammadi i Jomhour. Milaza izy fa tsy nahazoana alàlana avy amin'ny fianakaviany sy ny mpisolovavany ny fandevenana ny nofo mangatsiakan'i Mohammadi. Nampiany fa nosamborin'ireo manampahefana ny ray aman-dreniny mba hisorohana ny fihetsiketsehana na ny hetsipanoherana. Milaza i Jomhour fa tokony mamaly ny antony nandavan-dry zareo ny hanadihadian'ireo dokotera tsy miankina ny vatan'i Mohammadi ireo manampahefana [Fa]. Ampiany fa tadidintsika ny fomba nandevenana ny nofo mangatsiakan'i Zahra Kazemi, mpanao gazety mpakasary maty tany am-ponja. Ho hadinontsika vetivety foana nòho ny fahafatesan'i Zahra Kazemi ny fahalasanany. Manoratra ilay bilaogera
Nanambara ny fahafatesany ho mampiahiahy ny mpisolovavan'i Akbar Mohammdi ary nilaza fa mandra-pahitàna ny marina; tsy tokony halevina ny nofony. Nilaza ny rain'i Akbar talohan'ny nahafatesan-janany sy nandritra ny fifadiany hanina ho fanoherana ny fisamborana azy fa nampijaliana ny zanany.
Nilaza i Hanif Mazroi fa raha nofaizin'ireo manampahefana izay namono an'i Zahra Kazemi efa-taona lasa izay, tsy hiatrika tranga tahaka izao intsony isika. Manampy izy fa vantany vao sahirana amin'ny raharaha iraisam-pirenena ny vahoaka Iraniana, manao izay tiany atao amin'ny tanora Iraniana ry zareo [Fa].
Milaza i Fm Sokhan fa tsy hamela na hanadino ireo olona nahavanona ity loza ity isika [Fa]. Namoaka sarin'i Akbar Mohammdi izay nalain'i Kosoof, bilaogera an-tsary malaza, izy.
Milaza i Roozmaregiha fa miresaka momba ireo fandikàna ny zon'olombelona ao Libanona ireo antsoina hoe mpitondra fanovàna ary miahy ireo voafonja ara-pôlitika anatin'io tany io saingy tsy miteny na inona na inona momba an'i Iran [Fa]. Ampian'io bilaogera io fa tsy nisy na mpitondra fanovàna iray aza nanonona ny anaran'i Mohammadi. Voafonja nandritra ny valo taona tanatin'ny vanimpotoan'ny fitondram-panovàna i Akbar Mohammdi. Avy amin'io vanimpotoana io ihany koa i Akbar Ganji sy ireo voafonja ara-pôlitika am-polony hafa. Manampy ilay bilaogera
Efa maty i Akbar Mohammadi ankehitriny ary tsy misy dikany firy ny firesahana momba izay tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesany. Ny zava-dehibe dia ny hoe tao amin'ny fonja Evin izy no maty raha nifady hanina…tsy voafaritra ny zon'olombelona eto. Samy manana ny famaritany azy ny rehetra.
Miteny i Mikhak fa tsy hisy na inona na inona hiseho aorian'ity tranga mampalahelo ity. Mieritreritra ilay bilaogera fa mibahana ny haino amanjery ireo vaovaon'i Libanona sy ny fampitandreman'ny Firenena Mitambatra an'i Iran mba hanajanona ny fampanomezan-kery ny oraniôma [Fa].
Milaza ho tsy nahafantatra an'i Mohammadi sy ny fotokeviny kosa i Iranpaprazi, kanefa tena tsy rariny ny maka olona velona ka mamerina azy maty. Maharikoriko dia maharikoriko ireo fanambaràna rehetra ataon'ny manampahefana mba hampisehoany fa tsy manan-tsiny izy ireo ary hadisoan'i Akbar Mohammadi avokoa izany rehetra izany [Fa].
Tsy ny tranga mampalahelo niseho tamin'i Mohammadi irery ihany no resahan'ireo bilaogera Iraniana. Voaresaka tanatin'ireo bilaogy sasany ihany koa ny ady any Libanona.
Governemanta & mpianatra mpirotsaka an-tsitrapo
Araka ny voalazan'i Ansar Qods, nanome baiko hanakana ireo mpianatra mpirotsaka an-tsitrapo te handeha hiady any Libanona anatinà sisintany Iraniana-Tiorka ny governemanta Iraniana. Voalaza anatin'ny bilaogy fa voadaroky ny mpitandro filaminana mihitsy aza ny sasany tamin-dry zareo. Toa mandeha ny fifanarahana amin'ny governemanta Iraniana mba hamelàna ireo mpirotsaka an-tsitrapo manana pasipaoro hivoaka ny sisintany [Fa].
Mitatitra i Hojreh, bilaogera mpitarika ara-pinoana, fa hahazo alàlana avy amin'ireo manampahefana ao Makou hanitsaka ireo sisintany mampifandray an'i Iran sy Tiorkia ireo Iraniana sasany mpianatra izay nirotsaka an-tsitrapo ho any Libanona. Mandritra izay fotoana izay ihany, notaterin'ilay bilaogera ny fanambaran'i Tiorkia izay milaza fa hosamboriny avokoa ny rehetra vantany vao manitsaka an'i Tiorkia [Fa].